Qaanuunka ciyaarta turubka Balaagjaaga dalka Soomaaliya |bogga ciyaarta turubka Balaagjaaga77
Ugu Weyn Ee	/ Xeerarka Blackjack
Qaanuunka ciyaarta turubka Balaagjaaga
Miyaad raadineysaa hab sahlan oo aad ku baran karto sida loo ciyaaro jalaska madow? Haddii jawaabtu haa tahay, waa inaad hubisaa inaad eegto "sida loo ciyaaro" "blackjack" ee fudud ee fudud. Waxaa ku jira dhammaan tilmaamaha asaasiga ah ee aad u baahan tahay si aad u ogaatid sida loo sameeyo jack madow sida pro.
Waxaanu billaabi doonnaa tusaaleheena tusaha ah ee blackjack macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sharciyada ciyaarta. Warka wanaagsani waa in haddii aad ogtahay sida loo ciyaaro gamban casino, waxay sahlanaan doontaa ciyaarta ciyaarta internetka.
Blackjack waa ciyaar aad si toos ah uga hor tagto iibiyaha. Ujeedadu waa inaad haysato kaarar ka fiican marka aad isbarbardhigto. Xeerarku way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran isbeddelka cayaaraha, taas oo ah sababta loola tacaalayo sida loo ciyaaro blackjack laga yaabo inuu u baahan yahay xoogaa dulqaad ah dhinacaaga.
Muuqaalka cayaaraha internet-ka ayaa horseeday in dad badani ay ka tagaan casinos dhulka ku salaysan. Waxay si dhakhso ah u barteen sida loo ciyaaro madadaalada guriga, waxayna hadda ku raaxeeysataa faa'iidooyinka raaxeysiga iyagoo leh fursad ay ku ciyaaraan saacad kasta. Nidaamka internetka ma aha oo keliya 24/7, laakiin sidoo kale waxay ku haboon yihiin inay ciyaaraan.
Haddii aad taqaano sida loo ciyaaro 21 shaashad (blackjack) taas oo macnaheedu yahay inaad ka ciyaari karto meel kasta oo aad ku jirto Soomaali ama adduunka oo dhan. Haddii aad ujeeddo u leedahay ciyaar deg deg ah markaad fasax ka qaadato shaqada ama aad u isticmaasho si aad u dhaafto waqtiga intaad ku jirto safarka, adigoo ogaanaya sida loo sharaxo blackjack wuxuu ku siinayaa jimicsi xiiso leh.
Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xeerarka Xargaha
Blackjack waa cayaar karti oo la ciyaarayo hal ama ka badan makiinadaha caadiga ah. Inta badan casinos waxay ku adkaysanayaan isticmaalka makiinado badan, inkastoo aysan jirin qawaaniin sharci darro ah oo lagu qeexayo tan.
Ciyaaraha gaarka loo leeyahay ayaa u ogolaanaya isbedelada qaarkood, laakiin xeerarka garsoorka garsoorka waa in la raaco haddii ay ku ciyaaraan internetka ama goobaha dhulka ku salaysan. Ujeedada ugu weyni waa isku mid ah - leedahay qiime kaararka isku dhafan oo ka sarreeya ganacsadaha, iyada oo aan ka badnayn 21 jir.
Waxaad ka heli doontaa galka shaandhaynta sharraxaadda ee sharraxa "Strateji"; halkan waxaan ku haynaa wax fudud oo waxaan ku tusi doonaa miiska si aan kuu sheegno wax badan oo ku saabsan qiimaha kaararka:
2 illaa 9 - waxay xajiyaan qiimaha.
10, J, Q, K - dhammaantood waa la qiimeeyaa 10.
A - ace waxay yeelan kartaa qiime labajibbane - waxay noqon kartaa 1 ama 11. Iyadoo la eegayo shuruucda khayaanada fudud ee khayaanada ah waxay xaqiijineysaa in aad bedeli karto qiimaha wax kasta oo kugu habboon.
Shuruucda sharfiga ah ee khamaarka ah waxay ku kala duwanyihiin hal casino kale, taasina waa sababta aad ugu sheegeyso qiyaasta ugu yar iyo kan ugu sareeya ee la heli karo. Sida waafaqsan xeerarka khayaanada garaacida, waa in aad dhigtaa kharashkaaga ka hor inta uusan iibiyaha bilaabin.
Ganacsaduhu wuxuu laba kaararka u qaban doonaa ciyaaryahan walba iyo naftiisa. Xulashada ugu fiican ee aad heli kartid waa "dabiici ah" ama "blackjack instantly". Waxay ku lug leedahay haysashada A iyo kaar qiime leh 10. Taasi waxay ku siinaysaa wadarta 21 iyo, haddii ganacsade kale uu leeyahay dabiici, waxaad ku guuleysataa wareegga.
Xeerarka ganacsadaha ee ganacsadaha khamaarka ayaa tilmaamaya in ganacsadaha ay tahay inuu tuso mid ka mid ah kaararka ciyaartoyda. Midka labaad waxaa la muujiyey oo kaliya marka kaararku la barbar dhigo dhamaadka.
U fiirso waxa aad haysato gacantaada. Hadda waxaad leedahay doorashooyinkan:
Hit - ka codso ganacsade inuu ku siiyo kaar kale.
Istaag - ha weydiin kaarar dheeraad ah. Tani samayso haddii aad ku qanacsan tahay qiimaha wadarta.
Isku-xoqdo - haddii aad haysato laba ka mid ah gacantaada, waxaad kala qaybin kartaa kaararka si aad u sameyso laba gacmood oo kala duwan.
Qaar ka mid ah xulashooyinka kale ee shuruucda khayaanada blackjack ay u oggolaan karaan inay is dhiibaan, isku dhejiyaan, iyo caymis.
Marka aad dhammaystirto kaararka, waa waqtigii loogu talagalay. Adiga iyo ganacsadaha labaduba waxay muujinayaan kaararka, midkuna wuxuu ku dhawaadaa 21 guul.
Waa maxay Dhibaatada iyo Caqli-yarta ee Blackjack?
Waa su'aal caadi ah oo ah in ciyaartoyda Soomaalidu waydiiyaan. Marka la eego sharciyada khayaanada ciqaabta ah, gacanta adag waa mid aan ku jirin Ace. Taasi waxay kugu dhejineysaa meel adag, shaqadaada oo aad garaacdid iibiyuhu way adkaan doontaa.
Gacan jilicsan macnaheedu waa inaad haysato Ace iyo kaadh kale oo gacantaada ah. Hadda waxaad haysataa fursado badan oo aad ku heli kartid maxaa yeelay Ace waxay leedahay qiimo labanlaab (1 ama 11).
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay inaad eegto tilmaamaha sharciyada khadka tooska ah, laakiin aan aragno qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan sida loo guuleysto cayaarta qaybta soo socota.
Talooyin asaasi ah oo ku saabsan sida loo guuleysto Blackjack
Miyaad raadineysaa qaar ka mid ah talooyin madow si aad ugu guuleysato xitaa haddii aad tahay bilawga? Tilmaamaha ugu horreeya ee naqshadaynta jilicsan ee aasaasiga ahi waxay la xidhiidhaan kala qaybinta. Mid ka mid ah furayaasha lagu guuleysto khamaarjumka waa had iyo jeer inaad kala qaybsatid haddii aad haysato labalaab ama bakhti. Khabiirada ayaa sidoo kale soo jeedinaya in aadan waligaa kala qaybin laba-labo, Js, Qs, ama Ks.
Maxay tahay qaabka ugu wanaagsan ee lagu guuleysan karo ee khamaarka lagu dhejinayo? Waa arrin aad muhiim u ah in la tixgeliyo marka la yimaado istaraatijiyad ku saabsan sida loo helo khadka-kaaga shabakada internetka waa laba kaarood oo aad heshay bilowga. Haddii ay ka yartahay 11 ama ka yar, waxaad xor u noqotaa inaad si xor ah u qaadato maadaama aad kari kartid 21 jir. Waxa kale oo aad halis u noqon kartaa haddii aad haysato 12 ama 16, gaar ahaan haddii kaarka ganacsadaha uu ugu yaraan yahay 7. sheeg in taagitaanka 17 ama in ka badan ay tahay qayb ka mid ah sida aad ugu guuleysan karto blackjack adiga oo aan tirin istaraatiijiyada kaararka.
Miyuu Suurtogal u yahay inuu si Fiican ugu guuleysto Blackjack?
Hagidu ma tusi doonto sida aad ugu guuleysan karto marwalba videoka mar walba. Si kastaba ha noqotee, adoo raacaya talooyinkayaga madadaalo si aad u guuleysato, waxaad kordhin kartaa fursadahaaga gacanta ee aad ciyaareyso.